Mahajanga miady amin’ny haromotana: areti-mandoza ny kaikitr’alika tsy vita vaksiny | Région Boeny
Ny 28 okotobra no nankalazan’ny faritra Boeny ny andro maneran-tany hiadiana amin’ny haromotana, raha 28 septambra 2016 ny anjaran’ny nasionaly.
Tao amin’ny Sampandraharaham-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana na ny DRAE no nanantaterahana izany, notarihin-dRtoa Talen’ny DRAE sy ny Lehiben’ny kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy sy ny avy ao amin’ny CHU Mahavoky Atsimo, izay foiben’ny fanaovana vaksiny « Rabisin » na vaksinin’ny haromotan’ny biby eto Mahajanga, ny Dokotera Mahafaly.
Ho fampianarana ny olona hanao vaksiny ny biby an-trano, indrindra ny alika amin’ny vidiny iray alina ariary mandritra iray volana, no tanjon’ny hetsika. Natao ihany koa ho fanentanana fanafoanana ny aretina haromotana na ilay antsoina hoe « Lyssavirus », izay ao anatin’ny fianakaviamben’ny « rhabdovirus », nohon’ny kaikitr’alika romotra amin’ny olombelona.
Nambaran-dRtoa Talen’ny DRAE fa manerantany, isaky ny 30 minitra dia misy olona iray matin’ny kaikitry ny alika romotra. Tokony karakaraina tahaka ny zanaka an-trano ny araka izany alika rehefa vonona hiompy azy mba tsy hanaikitra hoy kosa ny Dokotera Mahafaly. Satria raha tsy voavakisiny izy dia efa tsy maintsy ny fahafatesana no miandry ny olona izay voakaikiny.
Ho an’ny eto Mahajanga, dia mitety fokontany isaky ny telo volana ny fanentanana amin’ny ady atao amin’ny haromotana sy ny fanaovana vakisiny ny alika. Ny tompon’andraikitra avy amin’ny DRAE sy ny kaomina ambonivohitr’I Mahajanga, ny Faritra Boeny, ny Prefektiora an’i Mahajanga ary ireo miaramila no mifarimbona manatanteraka izany.
Fantatra tamin’ity fotoana ity fa niisa 159 ireo alika maty noho ny haromotana tamin’ity taona 2016 ity teto Mahajanga.
Aorian’iray volan’ny hetsika fanaovana vaksiny ny alika dia hisy didy havoakan’ny kaominina mikasika ny tsy fahazoana intsony miompy alika tsy vita vaksiny eto Mahajanga.
Izao hetsika izao dia angatahinay mba tsy hijanona ho eto ambonivohitr’I Mahajanga fotsiny ihany fa mba hitety ny distrika rehetra hoy ny Lehiben’ny kabinetran’ny Faritra Boeny.